Erzurum နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများကအကြား Bansko ဆောင်းရာသီခရီးသွားလုပ်ငန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး - rayhab နေကြတယ်
[20 / 09 / 2019] Metro လိုင်း Goztepe Uskudar လေ့လာရေးပြန်လည်စတင်ပါ	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[20 / 09 / 2019] အဆိုပါအင်ဂျင်နီယာ Bilecik အတွက်ဝမ်းနည်းဖွယ်အခမ်းအနားများတွင်သေဆုံးရထားမတော်တဆကြုံတွေ့	26 Eskisehir
Homeတူရကီအရှေ့ Anatolia ဒေသကြီး25 ErzurumErzurum နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးသမားများအကြားတွင် Bansko ဆောင်းရာသီခရီးသွားလုပ်ငန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး
Erzurum နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးသမားများအကြားတွင် Bansko ဆောင်းရာသီခရီးသွားလုပ်ငန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး
30 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 25 Erzurum, 35 ဘူလ်ဂေးရီးယား, ဥရောပ, လောက, အရှေ့ Anatolia ဒေသကြီး, အထွေထွေ, တူရကီ, TELPHER 0
erzurum နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအကြား Bansko ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလခရီးသွားလုပ်ငန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု
Erzurum တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ခရီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍခေါင်းနှစ်လုံးသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တူရကီ၏အဖွဲ့အစည်းများအကြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုချဉ်းကပ်, ဒီအချိန်သူ့ရဲ့စံနမူနာပြ။ ဘူလ်ဂေးရီးယားရဲ့ Bansko မြို့ protocol ကိုအကြား Erzurum နှင့်မိတ်ဖက်စီမံကိန်းများနှင့်အတူ "ရေရှည်တည်တံ့သောဆောင်းရာသီခရီးသွားလုပ်ငန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးစီမံကိန်း" လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်အောက်မှာငွေကြေးထောက်ပံ့သည့်မြို့တော်မြူနီစီပယ်နှင့်ဥရောပသမဂ္ဂ (IPA: II ကို), နေဖြင့်ပြင်ဆင်ကြ၏။ အဆိုပါစီမံကိန်းအားနှစ်ဦးစလုံးခရီးသွားလုပ်ငန်းစင်တာများအတွက်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်ဖြစ်နိုင်ခြေလေ့လာမှုများလုပ်ဖို့မြို့နှင့်ကျော်ကြားနှစ်ဦးစလုံးအတွက်စွမ်းအင်ထိရောက်မှု၏နှင်းလျှောစီးနှင့်ဆောင်းရာသီခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်အသိပညာနှင့်အတူဖန်တီးလိမ့်မည်။
ဥရောပသမဂ္ဂနှင့်ပြင်ပဆက်ဆံရေးညွှန်ကြားမှုနှင့်ဥရောပသမဂ္ဂတို့ကကိုပြင်ဆင် Erzurum တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်အရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် Affiliates ဦးစီးဌာန (IPA: II ကို) Erzurum တှငျကငျြးပခဲ့ဖွင့်လှစ် "ရေရှည်တည်တံ့သောဆောင်းရာသီခရီးသွားလုပ်ငန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးစီမံကိန်း" (ပတ်ဝန်းကျင် Friendly ဆောင်းရာသီခရီးသွားလုပ်ငန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး) ၏အစီအစဉ်ကိုအောက်မှာအပြည့်အဝအမှတ်အသားများရ အစည်းအဝေးနှင့်အတူပယ်ကန်။ Erzurum Palan စီမံကိန်းရဲ့အဖွင့်အစီအစဉ်မှာ, ဒုတိယအုပ်ချုပ်ရေးမှူး Buyukkum ကြယ်, အောင်ပွဲခံကြေးမုံတဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်သည်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်, ပါမောက္ခစီမံကိန်းဒေသခံမိတ်ဖက် KUDAKA မှာကျင်းပ ဒေါက်တာ Osman နှင့်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများနှင့်တက်ရောက်သည်ကာယကံရှင်များကိုယ်စားလှယ်များ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်ဘူလ်ဂေးရီးယား Ivaylo Borisov Rahov bons ၏မြို့အနောက်တဖန်Demirdöğen Project မှ Co-ဒုမြို့တော်ဝန်။
နိဒါန်းရုပ်ရှင် Erzurum တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် Project မှအောင်ပွဲခံကြေးမုံပြီးနောက်မိန့်ခွန်းများတွင်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ၏အရေးပါမှုကိုမီးမောင်းထိုးပြ။ ကြေးမုံ, ကမ္ဘာ့လူဦးရေ၏ဖြစ်လာကြီးထွားလာလျက်နှင့်မယ့်ဒီတိုး၏စားသုံးမှုပုံစံ, ဒါပေမယ့်လည်းပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဘာဝဂေဟစနစ်တိုက်ရိုက်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိကြောင်းမှုကိုအလေးအနက်အဖြစ်, "တိုင်းဧရိယာတိုးအတွက်ချက်ချင်းလိုအပ်ချက်များကိုနေ့စဉ်အသက်တာကိုဆက်ထိန်းရန်နှင့်ကောင်းစွာဒီလိုအပ်ချက်ဖယ်ရှားပစ်နိုင်ရန်အတွက်အဆိုပါရှာပုံတော်ယနေ့ဖြစ်လာဆက်လက်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးလယ်ယာမြေလူ့အဖွဲ့အစည်းကနေအကူးအပြောင်းနှင့်အတူစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်ကြီးထွားလာစားသုံးမှု One နဲ့သေချာပေါက်အချက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးမဖြစ်သင့်, သင်တန်း, စွမ်းအင်ဖြစ်ပါတယ် "ဟု၎င်းကပြောသည်။
မြို့အ GREEN ဗွီးပြောပြသည်
ဖွံ့ဖြိုးပြီးတိုင်းပြည်များတွင်စွမ်းအင်အခြားရွေးချယ်စရာသတင်းရင်းမြစ်ကိုဖန်တီးရန်အားထုတ်မှုအတွက်ခေတ်ရဲ့အကြီးမားဆုံးခြိမ်းခြောက်မှုကြေးမုံ၏တဦးတည်းကြောင်းကိုအဓိကထားရရှိထားသူကြောင်းစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်များ Worldwide မှကွယ်ပျောက်သွားပါကအပြိုင်တိုးကြောင်းမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ အတော်လေးမြင့်မားတဲ့မော်ဒယ်ကြေးမုံထင်ရှားကြောင်း Erzurum ဤအခြေအနေတွင်လျှောက်ထားတဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ရဲ့အဆင့်ကိုအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ရှင်းပြ, "Erzurum ၏နေ့စဉ်နှင့်နှစ်ပတ်လည်နေရောင်ခြည်ကြာချိန်အခွင့်အလမ်းအဖြစ်မြင်ကျနော်တို့နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးဓာတ်အားပေးစက်ရုံ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့ကြသည်။ တစ်အင်အားစိုက်ထုတ်ထုံးစံ၌လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရန် Erzurum လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများအတွက်ဒီ, ဒါကြောင့်ယနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာစီးပွားရေးသံသရာကိုဖန်တီးရန်စတင်ခဲ့ပါတယ်။ အတူ တစ်ဦးရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံတည်ထောင်၌အကြှနျုပျတို့၏သောက်ရေကုသမှုစက်ရုံများ၏နိဒါန်းနှင့်အညီတူညီသောအယူအဆကျနော်တို့နှစ်ပေါင်းများစွာစီးဆင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စွန့်ပစ်ရေမှလျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကိုရယူနိုင်ခဲ့သည်ပါပြီ။ အဆိုပါမြို့တော်မြူနီစီပယ်; ကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်တန်း set ဗဟိုဖို့မြေမှကျေးဇူးတင်ပါသည်ကျနော်တို့လျှပ်စစ်မီးသို့ 28 ဆပိုအန္တရာယ်မီသိန်းဓာတ်ငွေ့ကနေကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့အဖြစ်ပြောင်းလဲ။ ဤစီမံကိန်းတစ်နှစ်ထက်ပိုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏သမိုင်း၏တစိတ်တပိုင်းအဖြစ်လျှပ်စစ်မီးထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့လေထုထဲသို့မီသိန်း၏လွှတ်ပေးရန်မတိုင်မီဒီအလမ်းအတွက်နှစ်ဦးစလုံးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဒီပဏာမခြေလှမ်း, မြှို့နယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှု၏ဗဟိုအမှန်တကယ်ကျနော်တို့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးချဉ်းကပ်ထိုင်သိသာသက်သေအထောက်အထားတစ်ခုအမှုဖြစ်ပါတယ် "ဟုသူကပြောသည်။
BANSKO အကြား ERZURUM နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု
သူ၏မိန့်ခွန်း "သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးသမားများဆောင်းရာသီခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း" တွင်အောင်ပွဲကြေးမုံအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်, မထိမိခဲ့တယ်။ ပြည်ထောင်စုကထောက်ခံနေတဲ့စီမံကိနျး၏နယ်ပယ်အတွင်း၌အလားတူဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အတူ Erzurum အတွက်ဥရောပရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလခရီးသွားလုပ်ငန်းအလားအလာသူတို့ Bansko ၏ဘူဂေးရီးယားမြို့နှင့်အတူပူးပေါင်းဖော်ပြထားသည်။
တဖြည်းဖြည်းနှစ်ဦးစလုံးမြို့ကြီးတွေမှာတိုးမြှင့်ကြေးမုံ, "ဆောင်းရာသီခရီးသွားလုပ်ငန်းပြင်းထန်မှု, အမည်ရ Erzurum နှင့်ရှေ့ဆက် Bansko အတွက်နှစ်ဦးစလုံးစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုပမာဏ၏ရရန်နှင့်နှစ်ဦးစလုံးခရီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်သဘာဝလမ်းမှစွမ်းအင်ကိုရယူနေဖြင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ရင်းမြစ်များနှင့်အတူအဓိကအားPalandökenနှင်းလျှောစီးစင်တာအားလုံးကိုအဆောက်အဦများ၏လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုအပ်ချက်အခြေခံအဆောက်အဦများဖန်တီးမည်ယခု မှစ. ငါတို့သည်ကိုယ်ကိုကိုယ်ရှာတွေ့တွေ့ဆုံရန်လိမ့်မယ် "ဟုသူကပြောသည်။
ငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းကိုရန်ညွှန်ကြားမှုတူရကီနှင့်ဥရောပသမဂ္ဂတို့အကြားစီးတီး Twin Grant ကအစီအစဉ်အောက်မှာထွက်သယ်ဆောင်လျက်ရှိ "အစိမ်းရောင်ဆောင်းရာသီခရီးသွားလုပ်ငန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးစီမံကိန်း" ဥရောပသမဂ္ဂ (IPA: II ကို) နယ်ပယ်ကပြင်ဆင်ဥရောပနှင့်ပြင်ပဆက်ဆံရေး Erzurum တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်အရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် Affiliates ဦးစီးဌာန။ မြို့ကိုက်ညီမှုရှိသည့် Grant ကအစီအစဉ်တူရကီ၏အီးယူ်နိုင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်၏ခြုံငုံရည်မှန်းချက်အီးယူ်နိုင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ပတ်သက်သောဒေသများရှိနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်လဲလှယ်မြှင့်တင်ရန်တူရကီနှင့်ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံများရှိဒေသခံအာဏာပိုင်များအကြားအထူးရည်ရွယ်ချက်မြို့ Twin စီမံကိန်းများကိုမှတဆင့်ဒေသခံအဆင့်မှာအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးစွမ်းရည်တိုးတက်လာနေသည်ရေရှည်တည်တံ့အဆောက်အဦများကိုဖန်တီးရန်ဖြစ်လိမ့်မည် ။
အဆိုပါအစီအစဉ်တွင်, ဥရောပသမဂ္ဂ၏သမ္မတနိုင်ငံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနဘဏ္ဍာရေးနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန, ဗဟိုဘဏ္ဍာရေးစာချုပ်များယူနစ်၏ဦးဆောင်ပံ့ပိုးပေးဖြစ်ပြီး, ပရိုဂရမ်ကိုဖွင့်စာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုကြသောအခွင့်အာဏာအားဖြင့်ပရိုဂရမ်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ဘဏ္ဍာရေးအလေ့အကျင့်များအတွက်တာဝန်ရှိကြလိမ့်မည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးစီမံကိန်း, ဒေသခံအစိုးရဌာနချုပ်ဝန်ကြီးဌာနမြူနီစယ်နှင့်ပြည်နယ်တွေမှာပြည်ထောင်စုတူရကီပြည်ထောင်စုအဆိုပါထောက်ပံ့ကြေးအစီအစဉ်သုံးခု key ကိုကာယကံရှင်များစဉ်အခါ, အစီအစဉ်ကိုတူရကီစီမံကိန်းဥရောပသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အပေါငျးတို့သလှုပ်ရှားမှုများ၏ခွင့်ပြုချက်အဘို့တာဝန်ရှိကြလိမ့်မည်။ Bansko မြို့အကြား link တစ်ခုတည်ထောင်ရန်ဖို့အစီအစဉ် Erzurum နှင့်ဘူလ်ဂေးရီးယားနှင့်အတူ "ရေရှည်တည်တံ့သောဆောင်းရာသီခရီးသွားလုပ်ငန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးစီမံကိန်း" အောက်မှာထွက်သယ်ဆောင်စီမံကိန်းအတွက်မိတ်ဖက်ရဖို့သေချာပစ်မှတ်ထားသည်အရှေ့မြောက် Anatolia ဖွံ့ဖြိုးရေးအေဂျင်စီ (KUDAKA) တွင်ဒေသခံတစ်ဦးစီမံကိန်းအတွက်မိတ်ဖက်အဖြစ်ကြယ်ပွင့်သည်။
စီမံကိန်းများ၏ခြုံငုံရည်ရွယ်ချက်နှစ်ခုဒေသများတွင်ဒေသခံအစိုးရများ၏ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်အတူစွမ်းအင်ထိရောက်မှုအပေါ်ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလခရီးသွားလုပ်ငန်း၏ချဲ့ထွင်ရေးအတွက်လုံလောက်နှင့်အသိပညာပေးဆောင်ရွက်မှုများပါလိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ Palandökenနှင့် Bansko နှင်းလျှောစီးစင်တာအတွက်စွမ်းအင်ချွေတာအလေ့အကျင့်ကိုတိုးမြှင့်စီမံကိန်းများ၏တိကျသောရည်ရွယ်ချက်, နှစ်ခုမြူနီစီပယ်အကြားရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက်ပူးတွဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများအတွက် protocol ကို, နှစ်ခုဒေသများတွင်အစားထိုးစွမ်းအင်ရင်းမြစ်များ၏အသုံးပြုမှုအပေါ်လမ်းပြမြေပုံ၏ဖယ်ရှားရေး, Palandökenနှင့် Bansko နှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်းသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်များဖြန့်ဝေကြလိမ့်မည်။
အဆိုပါနှင်းလျှောစီးစင်တာများအတွက်မြင့်မားတဲ့လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှုကိုနေချိန်မှာစီမံကိန်း၏အခြေခံ, နှစ်ဦးစလုံးနှင်းလျှောစီးစင်တာအတွက်လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု၏မြင့်ဖြစ်ပျက်မှုမှအာရုံစူးစိုက်ထားပါတယ်။ ခရီးသွားဧည့်များ၏နေ့တိုင်းတိုးပွားလာခြင်းနှင့်အသစ်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအတွက်ပါဝါစားသုံးမှုတစ်သိသိသာသာတိုးမြှင့်စကားရပ်ကိုတိုးမြှင့်စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်မြူနီစီပယ်ဘို့နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကိုထပ်မံလောင်ခံရဖို့သဘာဝသယံဇာတပါသညျစေသောအဖြစ်ကြောင်းကိုလေ့လာသည်။ ဤအခြေအနေတွင်ခုနှစ်တွင်စီမံကိန်း Erzurum Palandökenနှင်းလျှောစီးနှင့်ဘူလ်ဂေးရီးယား Bansko နှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်းအတွက်စွမ်းအင်စာရင်းစစ်ဖြစ်နိုင်ခြေလေ့လာမှုမှာကျင်းပပါလိမ့်မည်။ ရမှတ်သစ်ကိုစွမ်းအင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်စွမ်းအင်ကုန်ကျစရိတ်ဒီကိစ္စကိုအပေါ်အကြံပြုချက်များအတိုင်းအတာကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်အရာကိုယူနိုင်ပါတယ်ပေးအပ်ပါလိမ့်မည်ဖြစ်စေခြင်းငှါ, အဘယ်အရာကိုများစားသုံးမှုများတွင်အသုံးပြုနိုင်သည့်အတွက်အသေးစိတ်အခြားရွေးချယ်စရာစွမ်းအင်ရင်းမြစ်များအဖြစ်နှင်းလျှောစီးလျှပ်စစ်မီးကုန်ကျစရိတ်နှင့်အတူဖြစ်နိုင်ခြေလေ့လာမှု။
ဆောငျးရာသီခရီးသွားစင်တာများအတွက်စီမံကိန်းရဲ့နောက်ခံမှပတ်ဝန်းကျင်-ဖော်ရွေချဉ်းကပ်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအထောက်အကူပြုစေရန်, ထိုကဲ့သို့သောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင် applications များအဖြစ်ဒေသများရှိအသိအမြင်အဆင့်ပြုစုပျိုးထောင်ပါဝင်သည်ပါလိမ့်မယ်။ ဤအခြေအနေတွင်လက်အောက်တွင်စီမံကိန်း Bansko အတွက် Erzurum နှစ်ယောက်နှင်းလျှောစီးပြိုင်ပွဲကျင်းပလိမ့်မည်။ Erzurum မှစ.5အားကစားသမားများတွင်ကျင်းပမည့်ဘူလ်ဂေးရီးယား Bansko နှင်းလျှောစီးပြိုင်ပွဲရန်, Erzurum အတွက်ကျင်းပမည့် Bansko ကနေအားကစားသမား5ပံ့ပိုးမှုများပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါနှင်းလျှောစီးပြိုင်ပွဲအဓိကကျေးဇူးတင်စကားအားကစားသမားများအပါအဝင်နှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်း၏အသိအမှတ်ပြုမှု, ပတျဝနျးကငျြဆိုငျရာအသိပညာများတိုးပွားလာအသိအမြင်ကိုကျေးဇူးတင်မြင်သာအခြေတည်စီမံကိန်းကိုပစ္စည်းများနှင့်ယှဉ်ပြိုင်မှုဧရိယာများတွင်အသုံးပြုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သတိပစ္စည်းများပေးအပ်နေစဉ်။
အဆိုပါမီးရထားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအတွက်စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ 22 / 08 / 2019 စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့, ပါကစ္စတန်-တီဟီရန်-အစ္စတန်ဘူလ်ကွန်တိန်နာရထား 10 ။ အဆင့်မြင့်အလုပ်အဖွဲ့အစည်းအဝေးကိုသြဂုတ်လ 20 21-2019 နေ့စွဲအပေါ်တူရကီတွင်ကျင်းပခဲ့သည်။ စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး၏အစည်းအဝေး, ရထားလမ်းကဏ္ဍအပေါ်နိုင်ငံများမှကိုယ်စားလှယ်များတက်ရောက်ခဲ့သည်, ပို့ဆောင်ရေး TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာ Erol Arikan ဖွင့်ပွဲမိန့်ခွန်းနှင့်အတူစတင်ခဲ့တယ်။ ဥရောပကနေအာရှတစ်ရထားလမ်းရထားအော်ပရေတာ TCDD သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဖြစ်တည်ထောင်ခဲ့သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနောက်ဆုံး 16 နှစ်ပေါင်းသည်ဟုထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်အထွေထွေမန်နေဂျာ Arikan, ရထားလမ်းကဏ္ဍတွင် 133 ဘီလီယံပေါင်, ထိုရုရှားနိုင်ငံအနေဖြင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှကျယ်ပြန့်ပထဝီသယ်ယူပို့ဆောင်စေသည်မျဉ်းသားခဲ့သညျ။ တိုက်ကြီးနှင့် Marmaray နှင့်အတူချောမွေ့စွာရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေး၏ခေတ်သစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းပေးခြင်းအကြား Kars-Tbilisi-ဘာကူရထားလမ်း ...
ဒါဟာ Erzurum, တူရကီဆောင်းရာသီခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းပလက်ဖောင်းများတွင်တွေ့ဆုံ 19 / 02 / 2016 Erzurum အတွက်တူရကီဆောင်းရာသီခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းပလက်ဖောင်းစုရုံးခြင်း: မြှင့်တင်ရေးနှင့်ဆောင်းရာသီခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းပလက်ဖောင်းပူများအတွက်ဘုံမဟာဗျူဟာမူဘောင် Erzurum ပထမဦးဆုံးအစည်းအဝေးကိုကျင်းပခဲ့သည်ထွက်သယ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် created တူရကီရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလခရီးသွားစင်တာများများအတွက်ကွပ်မျက်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း, ။ Palandökenနှင်းလျှောစီးရေးစင်တာတွင်ကျင်းပခဲ့သောအစည်းအဝေးအရှေ့မြောက်ပိုင်း Anatolia ဖွံ့ဖြိုးရေးအေဂျင်စီအရှေ့ Marmara ဖွံ့ဖြိုးရေးအေဂျင်စီ (BRAND), Bursa Eskişehir Bilecik ဖွံ့ဖြိုးရေးအေဂျင်စီ (BEBKA), Serhat ဖွံ့ဖြိုးရေးအေဂျင်စီ (SERKA), ဗဟို Anatolia ဖွံ့ဖြိုးရေးအေဂျင်စီ (Rate) နှင့်အရှေ့မြောက် Anatolia ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီတည်ခင်းဧည် အဆိုပါမြှင့်တင်ရေးယူနစ််ထမ်းများ၏အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်နှင့်အတူအေဂျင်စီ (KUDAKA) ပါဝင်ခဲ့။ Palandökenတာဝန်များ၏ဧရိယာ၌တည်ရှိပြီးယင်းအစည်းအဝေးတွင်ပါဝင်သည့်အေဂျင်စီများ, Uludag, Kartalkaya, Erciyes နှင့် ...
Erzurum, Erzincan နှင့် Kars ဆောင်းရာသီခရီးသွားလုပ်ငန်းစင်္စီမံကိန်း 16 / 08 / 2016 Erzurum, Erzincan နှင့် Kars ဆောင်းရာသီခရီးသွားလုပ်ငန်းစင်္ Project မှ: Sarikamish Cibiltepe နှင်းလျှောစီးဟိုတယ်များ "Erzurum, Erzincan နှင့် Kars ဆောင်းရာသီခရီးသွားလုပ်ငန်းစင်္စီမံကိန်း" တွင်ဆက်လက်Sarıkamışအုပ်ချုပ်ရေးမှူး Yusuf Izzet Karaman, မြို့တော်ဝန်Göksal Toksoy ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာနအအရာရှိများက၎င်းတို့၏အလုပ်ဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ Karaman, ဒီမှာကသူ့ကြေညာချက်, ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာနများကအစပျိုးနှင့်အီးယူရံပုံငွေကထောက်ခံ, သိပ္ပံ, စက်မှုနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနသည် "Erzurum, Erzincan နှင့် Kars ဆောင်းရာသီခရီးသွားလုပ်ငန်းစင်္စီမံကိန်း" ဟုလေ့လာတွေ့ရှိချက်စင်ပေါ်ကိုအဘယ်အရာမှာကိုသိနိုင်ရန်အတွက်ဒေသတွင်း၌ပြုသောအမှုအလုပ်၏အားဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ 8 800 စီမံကိန်းယူရိုသန်းတန်ဖိုးကို ...
Erzurum နှင့် Bansko ဆောင်းရာသီခရီးသွားလုပ်ငန်းများအကြားပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး
အရှေ့မြောက် Anatolia ဖွံ့ဖြိုးရေးအေဂျင်စီ
Tüpraşဆွစ်ကုမ္ပဏီ Stadler ကိုသင်ရာမှစက်ခေါင်းတင်သွင်း! .. ကောင်းပြီ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးသား Hybrid ကိုစက်ခေါင်းအဘယ်သူမျှမခဲ့သလား
İZBAN9တစ်နှစ်ရဲ့ဥရောပခရီးသည်ယာဉ်ပြည်သူ့အင်အား Up ကို ''
ဒါဟာ Erzurum, တူရကီဆောင်းရာသီခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းပလက်ဖောင်းများတွင်တွေ့ဆုံ
Erzurum, Erzincan နှင့် Kars ဆောင်းရာသီခရီးသွားလုပ်ငန်းစင်္စီမံကိန်း
လုပ်ငန်းခွင်အကြောင်း Verdi ပြန်ကြားရေးကြားမှာ TCDD Erzurum Erzurum ဘူတာ Manager ကိုကြောက်မက်ဘွယ်-တူရကီအထက်တန်းမြန်နှုန်းရထား
တူရကီခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းပညာရှင်များ '' ကိုဖယ်ရှားခြင်းသို့မဟုတ်၏ရပ်ကွက်အတွင်းအတွက်ဆောင်းရာသီခရီးသွားလုပ်ငန်းစင်တာ Bansko
ဒါဟာဒုတိယဆု Bansko နှင်းလျှောစီးကိုယူ
Konak Tramway လိုင်းပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးစစ်ဆင်ရေး "အစိမ်းရောင်လမ်း"
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: ဇွန်လ 20 2003 Erzurum တူရကီ-Erzurum ပိုက်လိုင်း Express ကိုအလုပ်လုပ် ...
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: ဇွန်လ 20 2003 Erzurum တူရကီ-Erzurum ပိုက်လိုင်း Express ကိုအလုပ်လုပ်
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ စက်တင်ဘာလ 2019 (379) သြဂုတ်လ 2019 (507) ဇူလိုင်လ 2019 (634) ဇွန်လ 2019 (504) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (418) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (581) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (427) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (541) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (505) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1077) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (972) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (548) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1059) မတ်လ 2013 (1102) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (906) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1168) အောက်တိုဘာလ 2012 (830) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (976) ဇူလိုင်လ 2012 (863) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (563) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (12) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)
Bagdad Eisenbahn Dokumentarfilm Sektion 1 - rayhab ဖြစ်ပါသည်
Bagdad Eisenbahn Dokumentarfilm Sektion3- rayhab ဖြစ်ပါသည်
Bagdad Eisenbahn Dokumentarfilm Sektion2- rayhab ဖြစ်ပါသည်